Gaetano magnetic - Shiinaha Ningbo Sine
isticmaalka ugu weyn oo caan ku ah wax soo saarka ah
1. Shayga ku haboon iyadoo la isticmaalayo in dhirta, ridaya warshad mishiino processing, hardware & qalab warshad, dhismaha, duugga ah saldhigga recycle bir iwm tayo leh nuugid birta yar yahay, xir & budada bir jabay oo la kala firdheen goobta shaqada. Si tayo leh loo hubiyo goobta shaqada nadiif ah iyo Dawr iyo alaabta ceeriin.
2. saarka Tani waa ku haboon si loogu isticmaalo xaalado shaqo oo kala duwan marka laga reebo heerkulka sare.
3. Alaabta Tani hayn karaa magnetism sare muddo dheer, iyo in la si joogta ah loo isticmaali karaa.
4. Alaabta Tani waxaa loogu tala galay qaab fudud, sahlan oo hufan.
5. saarka Tani waxay abuurtaa a beerta magnetic xoog leh, oo u dhaqmo on dhulka si toos ah.
6. Waxay leedahay nidaam magnetic gudaha, dejinta ku haboon oo deg deg ah ee birta ah by sharciyeynta xamili kaas oo loogu talagalay by ergonomics.
Dhismaha ugu weyn oo xuduudaheedu
(mm) Size qaab LxAxH (mm) Dhexroor Wheel
E (mm) Taabta
D (mm) height nuugid (mm) NW
CT-2 Gaetano magnetic
isticmaalka ugu weyn oo caan ku ah wax soo saarka ah 1.It waxaa loo isticmaalaa in ay saami xirxiraan, goobta dhismaha soo gabagabeeyay nadiifinta, khadadka dhismaha mashiinka iwm Waxaa si hufan adsorb karaa qaybaha biraha yar hoos u dhulka ku. Ka dhig amaan, recycle wax, nadiifinta meesha shaqada.
2.It waxaa loo isticmaali karaa on Xaalad kasta, marka laga reebo at heerkulka sare.
3.It haysan kartaa ciidanka magnetic muddo dheer, waxaa loo isticmaali karaa oo ku saabsan 9 sano.
4.It waxaa inta badan ka samaysan aluminium daawaha, qaab-dhismeedka fudud, iftiinka iyo haboon, apprearance qurux badan.
5.The dhinaca magnet wajahaya dhulka ku, dhalin field magnetic ugu xoogga badan, 100% nadiif ah meelaha ugu kartaan biraha yar gudahood kala duwan oo shaqo oo ay.
6. Qaab-dhismeedka magnetic waxbaa laga beddeli karaa by biiro madow dhamaadka riixo, dajinaya qaybaha yar ku haboon iyo si dhakhso ah.
7. Waxaan astaysto macaamiisha our shuruudaha gaarka ah, aqbasho si OEM.
Oogada magnetic (mm)
Ballaca Wheel (mm)
Dhererka nuugid (mm)
Nala soo xidhiidh wixii macluumaad dheeraad ah. Email: sales@sinemagnetic.com
Previous: rullaluistemadka magnetic